Iindidi ezimbini ze-Oppo Reno elandelayo ziqinisekisiwe nge-Snapdragon 710 | I-Androidsis
I-Oppo icwangciselwe ukubonisa i-smartphone yokuqala kulungelelwaniso lwayo olutsha lweReno Epreli 10. Ngeli xesha, inkampani yaseTshayina igqibezela amanyathelo okugqibela ayimfuneko kwiifowuni zoluhlu lutsha ukufikelela kwintengiso. Enye yazo sisiqinisekiso se-3C saseTshayina esichaza ukuba iimveliso zilungele abathengi bokugqibela.
Namhlanje, iifowuni ezimbini ze-Oppo ezivela kuthotho olutsha lweReno zifumene Isiqinisekiso esisemthethweni seCCC ngeenombolo zemodeli 'PCAM000' kunye 'PCAT00'.
Ezi modeli zimbini kulindeleke ukuba zixhobise I-chipset yeQualcomm Snapdragon 710. Enye yezona ndawo ziphakathi kwee-SoCs ezivela kwi-San Diego enkulu kwaye i-octa-core chipset eqhuba kwi-2.2 GHz, idibene ne-Adreno 516 GPU. (Jonga kubo: Iisampulu zeekhamera ze-MP ze-48 ze-Oppo Reno, ifowuni yokuqala yochungechunge, ziyavela)
Oppo Reno ezahlukeneyo
Zombini ezi zinto ziqinisekisiweyo eza nefayile ye- Inzwa ephambili ye-MP eyi-48 Ukuseta ikhamera ephambili ngasemva. Isiqinisekiso se-3C siveze ukuba ezi fowuni zimbini ziqinisekisiweyo ziza ne-20W (5V / 4A) itekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza engeyiyo i-Super VOOC, njengoko obu buchwephesha buza namandla aphezulu.
Ngokweengxelo, Uluhlu luka-Oppo Reno luya kubandakanya ubuncinci ezahlukeneyo ezintandathu. Phakathi kwezi modeli, kuyakubakho uHlelo lweLamborghini, kunye noHlelo lwe5G ngenkxaso yokunxibelelana kwe5G. Ngokungafaniyo neemodeli eziqinisekisiweyo ze-3C, ezi zinto zimbini ziya kuza neeflegi zodidi oluphezulu. Kulindeleke ukuba babonise i-chipset ye-Snapdragon 855 (eya kuthi ibhangqwe kunye nemodem ye-Snapdragon X50 5G kuhlelo lwe-5G), ukuya kuthi ga kwi-12GB ye-RAM, ukuya kuthi ga kwi-512GB yokugcina kwangaphakathi.
Ikhamera engasemva yezi ziphelo ziphezulu kufuneka ize entsha Itekhnoloji ye-10X yokulahleka okungalahlekiyo. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ezi zixhobo zinokudlala umboniso oguqukayo we-AMOLED nge-HDR10 +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iindidi ezimbini ze-Oppo Reno elandelayo ziye zaqinisekiswa nge-Snapdragon 710
IXiaomi Mi Power 3: Ibhetri entsha yangaphandle